musha FOOTBALL MANAGER Alex Ferguson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Yakapedzisira Kugadziriswa pane December 18, 2017
LB inopa Nyaya Yese yeMutungamiri weBhola anonyanya kuzivikanwa neNickname; 'Fergie'. Our Alex Ferguson Childhood Story pamwe nes Untold Biography chokwadi inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, Tanga Kutanga.
Alex Ferguson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga
Sir Alexander Chapman Ferguson aiva akaberekerwa muGlasgow Scotland, pa 31st yaDecember 1941 naAlexander Beaton Ferguson (baba) naElizabeth Hardie Ferguson (amai).
Akazvarwa mumusha waambuya vake paShieldhall Road muGovan asi akakurira mune tenement ku667 Govan Road (iyo yakabva yaparadzwa). Somwana, aigara nevabereki vake pamwe nehanzvadzi yake Martin. Guta rake, Govan iguta rekushanda muGlasgow, Scotland. Munhu wose anogara muguta racho kusanganisira baba vaFerguson aiva nemukana mukuru wekupinda mubhizimisi rokuvaka chikepe. Muchidimbu, iye aigara munharaunda yekuvaka ngarava semwana.
Achikura, Alex akaenda kuBromloan Road Primary School uye gare gare Govan High School, uye vakatsigira Rangers football club. Zvisinei, pane chimwe chinhu chakasiyana nezvake zvakasiyana nevamwe vana vezera rake. Akanga ari mukomana akachenjera asi asina kufarira zvishoma zvidzidzo, uye akanga ane chido chokutamba nebhola.
Akasarudza kubha bhora bhora nemukoma wake, Martin, neshamwari kuburikidza nemigwagwa pakati pemisha yeimba gumi, uye nemumwe rubatsiro kubva kuna baba vake, akazova tarenda rakatendeka.
Alex Ferguson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Fergie akabva kumhuri ine urombo. Akanga ane mhuri yakashata asi inofara inotanga hupenyu muGevanardyard yemunzvimbo yeGlasgow. Baba vake havana kumbobvira vaona zvikwiriso zvakakosha kare mushure mekuvaka zvikepe. Akagara mubhokisi rekuvhota kuti awane upenyu hwakamupa mari shoma.
Kunyange zvakadaro yaiva makore matanhatu mukuzvarwa kwaAlex Ferguson kuti Alexander Beaton Ferguson asiye muchengeti webhokisi yemukana nekuda kwemukana wakauya mubhizimisi rekugadzira chikepe cheGlasgow. Akashanduka kuva shandisa mubatsiri . Panguva ino aive nechivimbo uye iye zvino aigona kupa Alex muduku (pasi), hanzvadzi yake namai.
Zvinosuruvarisa naAlex Ferguson, vose vabereki vake vakafa nechirwere chakafanana (kanzera yemapapu) vasati vava nemakore ekutanga kwe67 iyo iri pasi pemakore ekurarama kweupenyu hweBritish. Zvisinei, ivo vose vakanga vari kurema vanoputa. Baba vaAlex Ferguson vakafa nemukenza wemapapu munguva ye66 mugore ra 1979. Amai vaFerguson amai Erizabheti vakafa zvakare nekenza yemapapu muzera re 64 mugore ra 1986. Rufu rwake rwakaitika paakanga achingova vhiki nhatu mushure mekugadzwa kwake seManchester United Manager. Kufa kwake kusina nguva kwakasara mutevedzeri mutsva akasvinura uye nemarwadzo makuru kwemwedzi. Icho chaiva chikonzero chekuoma kwake kutanga kumabasa ake eManchester United. Chikonzero chakaita kuti asvike atore. Yaiva nguva refu yekuchema uye a "Zvinoparadza" kusunungura vabereki vose kune chirwere chakafanana (mutsa wemapapu).
Fergie akarwisana uye akatungamira hurumende yeScotland 'Tarisa Kanzera Pakutanga' mushandirapamwe wakagamuchira mhete ye £ 30million. Alex Ferguson akabvuma kutungamira mushandirapamwe nekuda kwemwoyo wake wega uye kuti shoko racho ribudise kuti kusangana kwokutanga kunogona kupa vanhu "Nguva yakawedzerwa" kuti ndipedze nemhuri yavo.
Akati: "Ndinoyeuka ndichiudzwa kuti vabereki vangu vaiva nekenza yemapapu. Ndinoyeuka zvakare zuva randakaudzwa kuti amai vangu vaiva nemazuva mashoma kuti vararame. Ndakaenda kuchipatara uye chiremba akandigarisa pasi, akanditaurira kuti aiva nekenza yemapapu, ndokubva ati: "Ane mazuva anenge mana kuti ararame". Akange akarurama. Akafa mazuva mana gare gare. Rufu rwake uye nguva yaiva chimwe chezvinhu zvinotyisa kupfuura zvose zvandakamboona zvakaitika. Asi zvinhu zvakasiyana zvino. Mazuva ano, mutanho wemapapu haufaniri kutongerwa rufu. Kuzviwana pakutanga kunogona kuponesa hupenyu hwako nekukupa nguva yakawanda yekushandisa nemhuri yako. Ndaida kupinda mumushandirapamwe uyu sezvo ndakarashika vabereki vangu vaviri kuti vape mapwere. Ndinoziva kuti kenza inoparadza inogona kuva nemhuri. Saka panzvimbo pokusaita chinhu pamusoro pacho, ndinokurudzira chero ani anonetseka kuti aongorore sezvaanokwanisa. "
Alex Ferguson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Mhuri uye Ukama Hupenyu
Alex Ferguson aigara kumaodzanyemba kweManchester munguva yehuduku hwake. Yaiva muguta rino akasangana nomudzimai wake, Cathy. Vose vakaroorana mu1966.
Imba yavo yakakurumidza kubhadharwa nemichero. Mwanakomana wavo wokutanga Mako akaberekerwa mu1968. Ndiyo makore maviri mushure mekuroorana kwavo.
Vakamirira kwemakore mana vasati vawane imwe. Pana 9th February, 1972, Alex Ferguson nemudzimai vaiva nedzimwe mapatya akanaka ainzi Jason naDarren.
Alex Ferguson ave akarondedzerwa semurume ane hanya nemudzimai wake Cathy. Akange amuda kubva pazuva rimwe. Ndiye mumwe munhu asingatarisi kuti mabasa evakadzi pamba. Dzimwe nguva aizobatsira mumabasa ose eimba kusanganisira kicheni.
Vose vadikani vakaona vana vavo vachikura mumufaro. Kuna Alex Ferguson, "Mhuri haisi chinhu chinokosha. Izvo zvose. "
Mhuri yavo yakatsanangurwa seimwe yevakabudirira zvikuru muUnited States. Mumwe vazhinji vakaona izvo zvakakodzera kufungidzira. Upenyu hwavo hwemhuri hunopemberera huri hwemakore anopfuura 51.
Alex Ferguson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Kukura Vana
Mwana wekutanga waAlex Ferguson Mark aiva aimbova maneja wePeterborough United uye aimbova mutambi wenhabvu.
Mumwe wemapatya ainzi Daren akafananidzirwa pasi apa akamboidzwa pasi pababa vake Manchester United kubvira pagore 1990 kusvika ku1994. Iye zvino anotarisira Doncaster Rovers sezvinenge panguva yekunyora.
Rimwe jaya, Jason Ferguson anomhanyira sangano rebhokisi rainzi 'Elite Sport'iyo yaimbove yakabatana naManchester United mumakore ebaba vake vachitarisira chikwata. Anomhanyirawo kambani yekuchengetedza zviitiko.
Alex Ferguson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Nyaya naDavid Beckham
Zvakajeka kuti Ferguson anofunga kuti David Beckham kuti ave mumwe wemhosva yake huru. Akada Beckham; iye akafunga nezvake semwanakomana uye haana chaanoita kunze kwekuyemura nzira yaakadzingirira kurota kwake kwebhora; nokuda kwesimba rake, kutsungirira uye chido chekuratidza kuti vanhu havana kururama. Asi Ferguson akasvika pakudavira kuti Beckham akanganwa chii chakanga chaita kuti ave nyeredzi uye, pakuwedzera, akashaya kushanda zvakaoma pamusara.
Muchi2003, Ferguson aibatanidzwa mukupfekedzwa kwekamuri neUnited player David Beckham. Akapomera Beckham kuburikidza nekukundikana kutarisa zvakare pane chinangwa cheArsenal ku Old Trafford. Ferguson inonzi yakataka nematombo ebhodhi mukutambudzika, iyo yakakunda mutambi ari pachiso uye yakakonzera kukuvara kwaBeckham.
David Beckham asi akaita chimwe chinhu. Akabvumira ronda kuti rifotwe uye rakabvunzurudzwa zuva rinotevera. Mushure mokucherechedza mabasa ake, Ferguson akaita chisarudzo chekumutengesa. Akatenda kuti Beckham akanzwa kuti akanga ave mukuru kudarika iye nekambani.
Ferguson akambonyora kuti Beckham ainge akakuvadzwa nechiso chake ndokumuita mukurumbira. Maererano naye 'Aive nechisarudzo chekutsvaga mukurumbira kubva kumunda mushure mekukuvara'.
Anonyora zvakare kuti pakanga pasina "Kutamba kwebhora" kuti Beckham apinde kuLos Angeles. 'Akaparadzanisa mukana wekuti ave weManyori anonyanya kunetseka nenhema.' anodaro Ferguson.
Alex Ferguson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Nyaya naRoy Keane
Sir Alex Ferguson anopa mufananidzo waRoy Keane, wake wekare mutungamiriri uye talisman, semunhu asinganzwisisiki uye anotyisa, anogona kutyisa kunyange iye uye, zvechokwadi, vatambi vakawanda mukati mekupfeka. Keane akatonga netsvimbo yesimbi uye rurimi rukuru, iyo Ferguson akati yaiva chikamu chakaoma zvikuru chemuviri wake.
Kuwa kwavo-kwakava chikamu che Old Trafford folklore naFerguson vanoratidzika kuti kuderera kwaKeane ari pamasimba masimba uye kushungurudzika kwaakazoita semugumisiro.
Keane anga akatsamwa nezvezvaainzwa kunge ari pasi pekuratidzira pre-mwaka Zvivakwa paManchester United nzvimbo yekudzidzira. Akaenderera mberi achipa izvo zvakanzi 'kubvunzurudza kune mbiri kuMUTV umo akatsoropodza Ferguson uye nevamwe vake vazhinji vechikwata kusanganisira Kieran Richardson, Darren Fletcher, Alan Smith, Edwin van der Sar naRio Ferdinand.
Keane akakumbira kuti boka racho rione iyo hurukuro kuitira kuti vazvigadzirire ivo pachavo uye chii chakazotevera kwaiva kusangana kunotyisa pakati pake nevatambi vakawanda, pamwe naFerguson. Akafanirwa kuita uye iye akabva atendera kubhadhara chikwereti cheKeane uye kuenda kwake kune Celtic.
Ferguson anonyora kuti Keane akapindira kuti amuone akakumbira ruregerero asi hukama hwakabva hwabva huchiita hutsinye zvakare mushure mokutaura kwevanhu pakati pevaviri.
Alex Ferguson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Nyaya na Ruud
Alex Ferguson aimbova nehutano naRuud iyo yaiti akauya nekuda kwekunyengera kwake. Kusagadzikana kwavo kwakava chikonzero nei Ruud van Nistelrooy akasiya Manchester United pasi pemamiriro ezvinhu akaipa mu2006. Nyaya yavo yakatanga apo Ruud akapika pachena uye akamutuka iye mushure mokunge aine benched panguva yeCarling Cup Final pamusoro peWigan.
Ferguson anoti haana kutarisira kutengesa mberi kune Real Madrid asi mufambiro wake paakamanikidza ruoko rwake. Zvisinei, Van Nistelrooy vakaita foni kuna Ferguson kunze kwebhuruu munaJanuary 2010 kuti akakumbire ruregerero nokuda kwekuita kwake.
Alex Ferguson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Kuyeuka Vashandi veMari
Achitevera kuvhara kwemwanakomana wake wemapatya Darren Ferguson Preston North End, Ferguson akatsamwa pakarepo akayeuka vatambi vechikwereti Ritchie De Laet, Joshua King naMatty James vanobva ku Preston pasi pehurumende yavo itsva. Akazotsanangurira kuti yakanga iri chikwata chavo vechirwi kuti vasazodzokera ku Preston mushure mekushandura mutungamiri. Stoke City maneja Tony Pulis yakatevera mushure mokuyeuka vaviri vaimbova vatambi veManchester United kubva kuPreston zvakare, vachitaura kuti vanoda vateereri kuti vatsigire purogiramu yakasimba yeboka rake.
Alex Ferguson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Rimwe Rakabvumira Gareth Bale kuti Slip Away
Sir Alex Ferguson haambofi anonetseka zvikuru pamusoro peavo vanobva kunze asi mutungamiri wekuManchester wekare akashandura pamusoro Gareth Bale, achibvuma kuti akanga asisipo kune mutambi.
Nyaya inobva kuManchester United Scouts yakaratidza kuti Bale vanosangana nechikwata chaFerguson kune mutambi wemakumbo ari kuruboshwe uyo angatsiva Ryan Giggs. Ferguson pachake akaita chikumbiro chevashandi kuti vauye naBra mberi kwaari. Zvisinei pane chimwe chinhu chakaita kuti kutengesa kuparare. Alex Ferguson mushure mekunge aona achinyunyuta ainge akapfupika.
Alex Ferguson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Mutungamiri weMabasa muChidimbu
Uyu 32 ane makore ane makore Ferguson akatanga basa rake rokutarisira kuEast Stirlingshire mu1974, achiita kuti pakarepo agadzikane nemoto wake, mukukwikwidza. Akatamira kuStr Mirren mushure memwedzi mishomanana, uye pasinei nekuendesa Vatendi kumusangano weScottish First Division mu1977, akadzingwa gore rakatevera nekuda kwekuputsa kontrakiti.
Yaiva naAberdeen iyo Ferguson yakasimbisa mukurumbira wake semukuru-mukuru wemotokari. Kuparadzanisa chikwata cheCeltic-Rangers chena, Ferguson akatungamirira Aberdeen kune matatu Scottish Premier League mazita, Four Scottish Cups, League Cup, Super Cup uye European Cup Winners 'Cup mumakore masere.
Alex Ferguson akatora mutungamiriri wekuzivikanwa asi ari pasi peManchester United club munaNovember 1986. Basa rake raive riri pamutsara mushure mekunge zvakanyanya kuoma zvakatangira munguva ye 1989-90. Mavambo ake anotanga kutanga semhosva yekufa kwaamai vake. Akapedza nguva yakareba achishungurudza amai vake avo vakafa nekenza yenguruve iyo inoda kumubhadhara basa rake. Nemafaro kwaari, The Red demons vakaona kuti vadzoka uye vakakunda FA Cup munguva yake yepakutanga. Izvozvo zvakamuchengetedza nebasa rake. Rwonzi rwekubudirira rakateverwa Ezvo zverimwe zvavanotaura ndezvenhoroondo.
Alex Ferguson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Nhaka Yake
Chifananidzo chendarira cheFerguson, chakagadzirwa naScottish sculptor Philip Jackson, yakabudiswa kunze kweTrans Trafford musi wa 23 November 2012.
Musi wa 14 October 2013, Ferguson akapinda mumhemberero umo gwagwa pedyo neTrans Traord rakatumidzwazve kubva Mvura Inosvika to Sir Alex Ferguson Way.
Moreso, Mutsara "Squeaky-bum nguva" yakagadzirwa naFerguson inotaura nezvematanho ekupedzisira emakwikwi emakambani akaiswa mune Collins English Dictionary uye Oxford English Dictionary.
Alex Ferguson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: Vadzidzisi vekurera
Vakawanda vevaFreguson vaimbova vatambi vakazove vatungamiriri vebhokisi rebhokisi ivo pachavo, kusanganisira Tony Fitzpatrick, Alex McLeish, Gordon Strachan, Mark McGhee, Willie Miller, Neale Cooper, Bryan Gunn, Eric Black, Bryan Robson, Steve Bruce, Mark Hughes, Roy Keane , Paul Ince, Chris Casper, Darren Ferguson, Ole Gunna Solskjær, Henning Berg naGary Neville.
Alex Ferguson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: zvematongerwo enyika
Akapiwa muBritish knighthood muZ1999 nekuda kwekugovera kwake mutambo webhola. Mune 1998, Ferguson akatumidzwa mumutsara wevakuru vakuru vemari vari voga kune Labor Party. Iye ari oga-akatsanangurwa socialist uye mubatsiri weMushandi weupenyu hwose. MunaJanuary 2011 Graham Stringer, Mutevedzeri weVashandi mu Manchester uye mutsigiri weManchester United, akadana Ferguson kuti aite a upenyu vezera. Kana izvi zvikaitika, zvaizoita Ferguson wokutanga kana kuti wekare mutevedzeri kana mutungamiri webhola kuti agare mukati House of Lords. Kushungurudza uye pamwe nevamwe Manchester Labor MP Paul Goggins akadzokorora kudana uku mushure mokunge Ferguson azivisa kupera kwake muna May 2013. Zvisinei, zvisingatauri mazita arimo Daily Mirror pepanhau raitaura pamusoro pe1 August 2013 kuti Ferguson yaigamuchira.
panguva 2014 rusununguko rwekuScotland referendum, Ferguson akanga ari mutsigiri wezwi uye achitsvaga Zviri nani pamwe chete mushandirapamwe wakatsigira eScotland uchiri chikamu cheUnited Kingdom. Akatsoropodza Scottish National Party, uye mutungamiri wayo Alex Salmond, nokuda kwechisarudzo chekuisa kunze kweScots vachigara kunze kweScotland, asi mukati meUnited Kingdom yose, kubva pakuvhota mune referendum.
Alex Ferguson Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts: dzidzo
Muna 2009, Ferguson yakagamuchira Honorary Doctorate muBusiness Administration kubva kune Manchester Metropolitan University.
Yaiva chipiri chechipiri chaakagamuchira kubva yunivhesiti, mushure mekutambira masters honory mu 1998.
Ryan Giggs Childhood Nyaya Plus Untold Biography Facts